Muuri News Network » Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoy Ee Saaka Oo Sabti Ah Loogu Hadal-heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkan Kaga Bogo Liiska Oo Dhamaystiran.
Waa Kuwee TOBANKA Ciyaartoy Ee Saaka Oo Sabti Ah Loogu Hadal-heynta Badan Yahay Suuqa Kala Iibsiga? Halkan Kaga Bogo Liiska Oo Dhamaystiran.
Salamu calaykum waraxmatulaah, dhamaan akhristayaasha sharafta iyo ixtiraamka naga mudanow ku soo dhawaada barnaamujkeenii tobanka ciyaartoy ee ugu qiimaynta sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee saaka oo Sabti ah kuwaas oo inta ugu badan looga hadlay suuqa kala iibisaga isla markaana lala xiriirinayo kooxo cusub. Suuqa kala iibisaga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmay waxayna koox kastaaba u furan tahay in ay samayso saxiixyo cusub.
Subaxnimadaan Sabtia ah suuqa waxaa ugu sareeya oo 4.9 helay weeraryahanka kooxda Atletico Nacional iyo xulka Colombia Marlos Moreno kaas oo ay goor dhaw ku dhawaaqday saxiixiisa kooxda Manchester City, kadib markii ay Football Whispers iyo Sky Sports soo saareen hadal heynta maanta ayey ku dhawaaqista timid.
Waxaan ka liidan oo booska labaad soo galay sidoo kalana helay qiimeyn dhan 4.9 Paul Pogba oo ay wali taagan tahay la xiriirinta Manchester United, inkastoo Jose shirkiisa jaraa’id ee ka hor kulanka Leicester City ku sheegay in dhawaan la dhameystiri doono.
Mathieu Debuchy oo aan looga baahneyn Arsenal ayaa isna sidoo kal 4.9 helay kaas oo si ba’an loola xiriirinayay kooxda Galatasaray ee dalka Turkia iyadoo warbixinada qaar ay sheegayaan in xidigana uu ogolaaday ku biiritaanka kooxda reer Turkey.
Shaqsiyaadka Kale ee maanta ugu hadal heynt badan suuqa hadaan soo koobno waxaa ka mid ah Riyad Mahrez oo lala xiriirinayo Arsenal, Lukaku oo lala xiriirinayo Chelsea, Lacazette oo ay dooneyso Arsenal, Jesse oo kusii jeeda Paris Saint Germain iyo Ashley Williams oo qarka u saaran inuu Everton u wareego.
Haddaba akhriste halkan kaga bogo dhamaan tobanbka ciyaartoy ee saaka suuqa kala iibsiga ugu qiimaynta sareeya, kooxaha lala xidhiidhinayo iyo waliba qiimaynta suurtogalnimada ay kooxahan ugu biiri karaan oo dhamaystiran: